Hiran State - News: HS:- Baarlamaanka Soomaaliya oo qaadacay shirka London
HS:- Baarlamaanka Soomaaliya oo qaadacay shirka London
HS:-Kulan uu shir gudoominayey xidhibaan Madoobe Nuunow Mohamed oo ah gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxay kaga doodeen shirka lagu qabanayo London, iyagoo sidoo kale xukuumada r/wasaare Gaas ka dalbaday inay horkeeno qorshe hoiwleedka Roadmap-ka.
Gudoomiyaha baarlamanka mudane Madoobe Nuunow Mohamed oo shir guddoominayay kulanka ayaa sheegay inay u qabanayan xukuumadda inay ku horkeento Roadmap-ka muddo saddex maalmood ah si ay u ansixiyaan.
"Waxaan doonaynaa inaan sharciga waafajinno heshiiska Roadmap, adduunka iyo shacabka Soomaaliyeed waan markhaati gashanaynaa, waxaana caddeynayaa in la ii keenay qoraalkii hore ee heshiiska oo ku qoran afka Ingiriiska, xukuumadda ayaan ka doonaynay inay noo keento wayna diiddan tahay inay noo keento," ayuu yiri gudoomiyuhu.
Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay inaysan diidanayn heshiiska Roadmap, balse ay xukuumaddu diidan tahay inay horkeento baarlamaanka, wuxuuna si kulul u yiri haddii ay saddexda maalmood xukuumaddu ku horkeeni wayso ay howl ka qabanayaan.
Sidoo kale waxaa diidmo qayaxan laga keenay oo ay Xildhibaannadii kulanka kasoo qaybgalay dhammaantood muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan shirka lagu qabanayo London bisha Feberaayo, iyagoo xusay in shirkaas uu yahay mid lagu doonayo in madaxbannaanida Soomaaliya wax loogu dhimo.
Mudanayaashu waxay shirkaas ku tilmaameen mid lagu doonayo in Soomaaliya Caretaker Government amaba maxmiyad lagu gelinayo, iyagoo xusay inay uga digayaan shacabka Soomaaliyeed in shirkaas la taageero amaba la buun buuniyo.
Ugu dambeyn, waxaa halkaas ka hadlay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur (A Madoobe) oo sheegay in ururada iyo beesha caalamka looga baahan yahay inaysan faragelin ku sameyn arrimaha baarlamaanka Soomaaliya iyadoo cid gaar ah loo daneynayo.
Dhanka kale, waxaa baaqday kulan ay xidlhibaanada taageersan gudoomiyahii hore ee baarlamanka Shariif Xasan ku yeelan lahaayeen xarunta golaha shacabka, kadib markii mudanayaasha kulanka yeeshay ay ku hanjabeen inay gacanta ula tegi doonaan hadii ay isku dayaan inay ku shiraan xarunta golaha shacabka gudoomiyahii xilka laga xayuubiyey iyo kooxdiisa, kadibna waxey aadeen Mahiga maadama ay isaga wax ku yahiin.
Sikastaba dowlada Ingiriiska ayaa qorsheyneysa sidii dalka Soomaaliya loogu dhiibi lahaa mudo 10 sano ah, halka caasimada Soomaaliya ay ka howl galayaan madaxweyne, xukumad iyo baarlamaan ay hogaaminayaan muwaadiniin Soomaaliyeed uuna ka babanayo calanka Soomaaliya.
· admin on January 24 2012 18:31:46 · 0 Comments · 1749 Reads ·
14,606,120 unique visits